Global Voices teny Malagasy » Pakistana: Bilaogin’ny Fiafenana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Desambra 2018 18:37 GMT 1	 · Mpanoratra Omer Alvie Nandika miora
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Hehy, Mediam-bahoaka, Politika
Lalina avy ato anatin'ny toeram-piafenana ambanin'ny tany vao azoko aho no manoratra ity lahatsoratra ity. Ny antony nisafidianako toerana ambanin'ny tany tahaka izao dia tsy hoe akory be fanahiana aho ny amin'ny fifandirana mananontanona ao Afovoany Atsinanana izay hivadika nokleary (na dia antony iray mitombona aza izany) fa satria niakatra be ny lazan'ny bilaogiko, niala taminà mpanaraka roa mampalahelo ka nahatratra isa goavana, mpanaraka 3 sy tapany. Teckel  manana tongotra telo variana amin'ny ezaka mampalahelo ataoko amin'ny eso ara-politika ilay tapany. Noho io vondron'olona tia ahy diso tafahoatra io dia nanapa-kevitra ny hiafina anatin'ny lavabatoko vaovao tsy misy mahafantatra aho, mba tsy ho tototry ny fangatahana sonia.
Hita anatin'ny fehy androany ny fangaro mahaliana misy ireo lahatsoratra anaty bilaogy Pakistaney, isan'izany ny tsikera an-tsoratra, an-dahatsary ary amin'ny alàlan'ny podcast. Hatombotsika amin'ny lahatsoratra mandóna farany nosoratan'i Fountainhead manome ny antsipirian'ny faharavan'ilay Fanjakàna Mirenireny  (rohy maty) izany.
Mbola manantena i Glasshouse manoloana ny fahamatoran'ny fifandirana eo amin'i Etazonia sy i Iran .
Indrisy, tsy afaka manoratra betsaka ao amin'ny bilaoginy i Suspectpaki, iray amin'ireo bilaogera namako ela indrindra, noho ny tsy fahasalaman'ny masony. Nifidy ny hanao podcast izy noho izany, manome taim-bava tsisy fanomanana, izayhita fa tsikera mitombona ara-piarahamonina sy ara-politika. Tsy maintsy mihaino izany  ianareo rehetra.
Bilaogera Pakistaney iray hafa, Bring The Funny (na i Sami Shah), ny lahatsorany izay narahiko akaiky nandritra ny volana vitsy lasa, tsy hoe satria manao tsikera tena mampihomehy fotsiny izy fa satria koa mpanao hatsiaka an-tsehatra matihanina. Rehefa nikiry be aho, ary azoko antoka fa nanao toa ahy koa ireo mpankafy maro, nampiditra rohin'ireo rakipeo sy lahatsary nandritra ny seho an-tsehatra nataony izy. Sosokevitra goavana ity, tsidio izy ireo  satria tena mifandray amin'ny zavamisy ny hatsikana ataony.
Farany, manome ny fandalinako ny fiampangàna  (rohy maty) an'i Scooter Libby  aho. Tsy vitan'ny hoe lalina fotsiny ny votoaty anatin'io lahatsoratra io fa vao haingana ihany koa izy no voatendry hahazo ilay mari-pankasitrahana ho an'ny Mpilalao Sarimihetsika Mendrika indrindra noho ny vazivazy fanarabiana niseho ho toy ny lahatsora-baovao tena matotra.
Hiala aho izao ary hitsotsotra anatin'ny trano fonenako vaovao, izay tena mitovy amin'ny “Bat Cave “. Ny hany mahasamihafa azy dia tsy i Alfred (Mpanompon'i Batman) no ahy, fa ity singan'olona mahantra, be volombava ity no mba mpanompoko, izay rehefa dinihako, toa misy fitovizana hafahafa amin'i Ossama Bin Laden. Andraikaky ô, ampio aho!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/01/130507/
 faharavan'ilay Fanjakàna Mirenireny: http://www.airdance.proboards50.com/index.cgi?board=anwrart&action=display&thread=1171021868
 fifandirana eo amin'i Etazonia sy i Iran: http://politicalpakistan.blogspot.com/2007/02/if-i-was-iranian.html
 mihaino izany: http://www.suspectpaki.com/2007/03/07/podcast/
 tsidio izy ireo: http://samishah.wordpress.com/2007/03/04/where-i-am-march-2007/
 Scooter Libby: https://fr.wikipedia.org/wiki/Lewis_Libby
 Bat Cave: https://fr.wikipedia.org/wiki/Batcave_(comics)